ဤတွင်အကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲများနှင့်မွမ်းမံမှုများ၏ 10 - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment "ဤတွင် 10 အကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲများနှင့်မွမ်းမံမှုများများ - BGR
ဤတွင်အကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲများနှင့်မွမ်းမံမှုများ၏ 10 - BGR
အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကြီးဝဠာကို Simulator ကို၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်နေ့သုံးနှစ်နီးပါး အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky ဖြစ်ကောင်းအားလုံးအချိန်က၎င်း၏အရေးပါဆုံး update ကိုသည်အဘယ်အရာအားလက်ခံတွေ့ဆုံ: က၎င်း၏ကတိတော်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုတစ်ခု update ကို။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲရေးမင်္ဂလာပါဂိမ်းများဂိမ်းလွှတ်ပေးရန်မတိုင်မီအချို့သတင်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
ကျော်လွန်. မသာဖြစ်ပါသည် အစဉ်အဆက်ဂိမ်းအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အကြီးမားဆုံး update ကို ဒါပေမယ့်မင်္ဂလာပါဂိမ်းများကိုတောင်တကယ့်ကိုနောက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကြောင်းဆိုလိုရာ Update ကို 2.0 ခေါ်ခံရဖို့ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky ။ တကယ်တော့လုပ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအသစ်သောအရာတို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသစ်သောသတ္တဝါများနှင့်စမ်းသပ်ဖို့ features အသစ်တွေကိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးကိုစာရင်းပြုစုဖို့ကြိုးပါလိမ့်မယ် ( အပ်ဒိတ်မှတ်စုစစ်ဆေး ) ။ အစား, အကြှနျုပျတို့သညျကိုပြန်အတွက်သွားသင့်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဆယ်အကြောင်းရင်းများစာရင်းပြုစုပါလိမ့်မယ် အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky .
ပြီးတာနဲ့တဖန်ငါပြင်ဆင်ချက်နှင့်ဖြည့်စွက်များစွာနှင့်များစွာ ကျော်လွန်. အပ်ဒိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ပြန်လုပ်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာဆယ်မှတ်ငါ့ကို fascinate သော patch ကိုမှတ်စုထဲမှာနေသောခေါင်းစဉ်:
virtual reality များအတွက်ပံ့ပိုးမှု သငျသညျယခုအားလုံးကစားနိုင်ပါတယ် အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky PC ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် PSVR အပေါ် RV ။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကနှစ်ခုသည် Modes အကြားချောမွေ့စွာကိုပြောင်းနိုင်ပြီး, သင်ပြုတခါ, ဂိမ်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ menus တွေအထူးသ virtual reality များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြခြင်းနှင့်သင်ပင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကြည့်ရှုနှင့်တစ်ဦး virtual reality controller ကိုနှင့်အတူတ္ထုဆုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။
အကောင်းဆုံး multiplayer : ဝဠာရှာဖွေစူးစမ်းနေချိန်မှာသင်ကအခြားကစားသမားဖြည့်ဆည်းရသောအခါရှိသမျှသောဇာတ်ကောင်မော်ဒယ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအပြင်, သငျသညျအာဆီယံများအတွက် Voice ကို & ကွန်ယက်အဖွဲ့ interface ကိုသုံးနိုင်သည်။ consoles စပေါ်ကစားသမားအများဆုံးအရေအတွက်4နှင့် PC ကို 84မှ 32 ကနေတိုးတက်လာခဲ့သည်။
Anomaly အာကာသ သင်တစ်ဦးတည်းခံစားရ? ရှာဖှေတှေ့ အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky ၏အသစ်လူမှုရေးစင်တာ - အာကာသ Anomaly ။ 32 ကစားသမားတစ်ပြိုင်နက်အချက်အချာအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်သင်ဖြည့်ဆည်းရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်တိုင်အောင်, ခြေစွပ်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်ပင်အတူတကွမစ်ရှင်တွင်ပါဝင်ရန်သူတို့၏သင်္ဘောများစစ်ဆေးပါ။
နည်းပညာသစ်ပင်များ in: ယူအဘယ်သို့အရေးယူဆုံးဖြတ် အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky အမြဲတမ်းရုန်းကန်ခဲ့ပေမယ့်နည်းပညာအသစ်သစ်ပင်များသစ်ကိုပစ္စည်းများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများသော့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုတစ်ဦးရှင်းလင်းရုပ်ပုံပေးခဲ့ပါသည်။
dynamic NPCs ငါသည်ဤကို virtual ဝဠာကိုရှာဖွေစူးစမ်းစတင်လာတဲ့အခါ, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာများ၏တဦးတည်းသောပစ္စည်းများရှာဖွေနေသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့သတ္တဝါများတွန်းလှန်ခန့်လမ်းလျှောက်အခြားမည်သူမဆိုမြင်ကြပြီဘယ်တော့မှဖို့ဖြစ်တယ်။ တွင် ကျော်လွန်. အဆိုပါဂြိုလ်သားနောက်ဆုံးတော့တဝိုက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်လိမ့်မယ်အဖြစ်ဤမရှိတော့အမှုကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
သတ္တဝါစီးနင်း : သင်ငါးစာကိုအသုံးပြုပြီးသတ္တဝါတွေယဉ်ပါးခဲ့ကြပြီးတာနဲ့အခုသင် mount နှင့် mount နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပတ်ပတ်လည်ကသူတို့ကို။ သငျသညျနို့များအတွက်ယဉ်ပါးသတ္တဝါများ, ကြက်ဥနှင့်အခြားချက်ပြုတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလည်းစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။
အခြေခံပညာအဆောက်အဦတိုးတက် သငျသညျအခြေစိုက်စခန်းများတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ယခုအသစ်တခုရှုထောင့်ရှိသောကွောငျ့, ပူးတွဲအချက်များမှအမြင်အာရုံတွေကို get နှင့်သင့် Jetpack ကိုသုံးပါကဒီ update ကိုခစျြလိမျ့မညျ။
cockpit ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရေယာဉ်သို့သွားအဖြစ် အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky ဒါကြောင့်အတွင်းတာရှည်ကြည့်ဖူးပါ။ ဒါဟာကနေတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာ ကျော်လွန်. အားလုံး cockpit ၏ဒီဇိုင်းကိုလုံးဝဒီဇိုင်းပါပြီ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျ VR အတွက်ယာဉ် 360 ဒီဂရီတစ်ဦးအမြင်ရှိနိုင်ပါသည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစာမျက်နှာ : အဆိုပါအပျော်အပါး အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky ၏ စကြဝဠာတစ်လျှောက်လုံးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များ၏နီးပါးအဆုံးမဲ့ငွေပမာဏကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစာမျက်နှာ updated နှင့်တိုးချဲ့နှင့်အတူ, သငျသညျယခုမတိုင်မီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်၌သင်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကြည့်ရှုရန်နှင့်တာရှည်ကျမ်းကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Assis သငျသညျယခုကုလားထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နိုင်ပါတယ်။ Gamechanger ။
ငါမူရင်းဂိမ်းကိုမပြဘူးလျှင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုအတူ update ကို 2.0 ကြည့်ဖို့ယခုအပတ်ဂိမ်းတွေနဲ့နာရီအနည်းငယ်ဖြုန်းဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကမယုံနိုင်လောက်အောင်အထင်ကြီးင် ဂိမ်းစတူဒီယိုဒါသိသိသာသာပစ်လွှတ်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းလုံးဝအခမဲ့ updates များကိုအတူဂိမ်းသူမ၏ထောကျပံ့များဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ။
Image ကိုရင်းမြစ်: မင်္ဂလာပါအားကစားပြိုင်ပွဲ
BGR - သင်လွဲချော် ... သင်အမှန်တကယ်ကိုမမွငျနိုငျသောကွောငျ့နောက်ဆုံးအဆင့်၏အီစတာကြက်ဥ